Mpanondraka nify tsara indrindra | Iza no hovidiana? Hevitra, vidiny ary fampitahana
Irrigators tsara indrindra
am-bava b rano jet
Te hahazo vokatra tsara indrindra amin'ny fahadiovana nify ve ianao? Aza hadino ny miborosy na floss mahazatra ary manomboka mampiasa irrigator dental. Izy ireo dia mahomby, azo antoka, mora ampiasaina ary afaka mamonjy anao fitsidihana maro any amin'ny mpitsabo nify.
Eto ianao dia hahita ny fampahalalana feno sy tsy mitongilana momba ny irrigators am-bava: Fampitahana, famakafakana, hevitra ary vidiny amin'ireo modely sy marika tsara indrindra mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka amin'ny filanao sy ny teti-bola. Aza very hevitra ary mahazo ny tsiky tsara indrindra!
Fampitahana Oral Irrigators tsara indrindra
Ampitahao amin'ireo tabilao roa ireo ny endri-javatra manan-danja indrindra amin'ny birao na fitaovana tsy misy tariby tsara indrindra.
Fampitahana irrigators Tabletop tsara indrindra
Miaraka amin'ny borosy
Fanerena ambony indrindra
Jereo ny fifanarahana
Tsy misy vidiny
Fampitahana Irrigators Travel tsara indrindra
No. 1 amin'ny varotra
Wp-450 tsy misy tariby
Batterie azo averina
Dental irrigators fampitahana
Irrigators am-bava tsara indrindra
Inona no atao hoe Oral Irrigator?
Inona no irrigator nify hovidiana?
Inona no irrigator nify tsara indrindra?
Amin'izao fotoana izao dia misy modely an-jatony eny an-tsena, saingy ireo no 10 irrigators am-bava tsara indrindra (desktop sy solosaina finday) ary ny ankafizin'ny mpampiasa Espaniola:
Waterpik WP-100 - Vokatra avy amin'ny ...
10 haavon'ny tsindry hatramin'ny 100 Psi
Loha 7 tafiditra
Implants mouthpieces manokana, orthodontique, sns..
360 degre fihodinana tendrony
bokotra eo amin'ny tahony
650 ml fitahirizana
Na dia tsy modely ambony indrindra amin'ny orinasa aza izy io, ny WP-100 dia ny irrigator nify lafo indrindra teto amintsika nandritra ny taona maro.
Ity hydropulsor ity dia an'ny marika malaza eran'izao tontolo izao amin'ny fahadiovana am-bava bebe kokoa atolotry ny mpitsabo nify, manana ny tombo-kase ny Ada (American Dental Association) sy ny fahombiazany dia efa voaporofo ara-tsiansa.
Mifanaraka amin'ny fepetra takianao ny filan'ny mpampiasa rehetra, indrindra fa misy nozzles ho an'ny filana rehetra.
Asa fanadiovana sy fanorana gum
El WP-660 no soso-kevitray ho an'izay mitady irrigator ny kalitao ary tena feno miaraka amin'ny vidiny namboarina. Ao anatin'ny sandan'ny vidiny antonony izy io, avy amin'ny marika malaza ary tsara ho an'ny mpampiasa rehetra ny mombamomba azy sy ny fitaovana.
Ity hydropulsor ity dia manana ambaratonga hery isan-karazany, nozzles ho an'ny karazana filana rehetra ary ny teknolojia tsara indrindra amin'ny orinasa manana patanty betsaka indrindra eny an-tsena.
5 haavon'ny tsindry hatramin'ny 51 Psi
Loha 4 tafiditra
600 ml fitahirizana
Rindrina na Table Mount
Fitsarana 30 andro
Braun dia nanangana laza tsara eo amin'ny tontolon'ny fahadiovana sy ny nify anisan'ny tsara indrindra eny an-tsena ihany koa ny mpanondra-drano azy.
El Oxyjet avy amin'i braun dia mpivarotra tsara indrindra izay misongadina amin'ny fananana rafitra fanadiovana izay manambatra rano mitete amin'ny tsindry amin'ny rivotra voadio, izay mahatonga ny ekipa a safidy tsara ho an'ny olona manana gum saro-pady.
Amin'ny ankapobeny dia fitaovana feno tanteraka izy io ary afa-po amin'ny vokatra atolony ny mpampiasa. Tsara ny manonona izany ny tsindry ambony indrindra dia ambany noho ny ankamaroan'ny fitaovana, fa avy amin'ny Oral B dia nampahafantatra anay izy ireo fa tsara izany araka ny fianarany.
Aquapik 100 - Mpanondraka nify ...
10 haavon'ny tsindry hatramin'ny 130 Psi
Fanakatonana mandeha ho azy
Raha manana teti-bola tery ianao dia tsy mila miala amin'ny irrigator am-bava tsara satria misy safidy maromaro eny an-tsena izay takatry ny tetibola rehetra ny vidiny. Tianay ny hanasongadinana ity modely ananany ity references mpampiasa tena tsara izay efa nanandrana ary inona no atolony Warranty 5 taona.
Ny Aquapik avy amin'ny marika Oralteck Usa dia ADA voamarina, manana fepetra voafaritra tsara, fitaovana feno indrindra ary a tena nanitsy ny vidiny mifandraika amin'ny fifaninanana.
Irigator am-bava na nify ...
5 haavon'ny tsindry hatramin'ny 75 Psi
Loha 11 tafiditra
1100 ml fitahirizana
Ny hydropropeller ara-toekarena hafa izay misongadina ambonin'ny ambiny dia fitaovana amin'ny marika Pro-HC, manokana ny PREMIUM RANO, izay nodinihinay ihany koa tao amin'ny tranokalanay.
Izy io dia vokatra iray izay Izy io dia miavaka indrindra amin'ny isan'ny loha tafiditra sy amin'ny fiasa fototra nefa mahomby sy tsotra. Ankoatra ny fanatsarana ny fahadiovana am-bava dia misy loha roa ho an'ny fanondrahana nasal.
Water System Premium Analysis
2 haavon'ny tsindry hatramin'ny 75 Psi
210 ml fitahirizana
Na eo aza ny vidiny ambony ambany, ny Wp-450 Izy io dia iray amin'ireo hydropulsor portable be mpividy indrindra eto amintsika. Ny famaritana feno sy ny traikefan'ny marika dia mahatonga azy io ho azo antoka.
Misongadina ambonin'ny salan'isa ao amin'ny kalitao tsara kokoa amin'ny fitaovana, fahafahan'ny tanky bebe kokoa, fahaleovan-tena bebe kokoa amin'ny bateria ary ao anatin'izany ny nozzle manokana ho an'ny implants sy ho an'ny orthodontique.
Waterpik 450 fanadihadiana
Vidio ny Panasonic EW1211W845
Fanerena hatramin'ny 85 Psi sy 1400 pulses isa-minitra
Fomba 3 (AIR IN NORMAL, AIR IN SOFT, JET)
Loha 2 tafiditra
130 ml fitahirizana
tsara indrindra Panasonic irrigators Izy ireo no modely amin'ny bateria ary ity irrigator am-bava tsy misy tady ity iray amin'ireo fitaovana manana vidiny tsara indrindra eny an-tsena. Izany dia nametraka azy ho toy ny iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra eto amin'ny firenentsika, ambonin'ny waterpik aza.
Izy io dia fitaovana misy hery tsara ary fomba fiasa telo hahazoana vokatra tsara amin'ny fahadiovana am-bava. Ny hany tsy fahampiana raha oharina amin'ny modely hafa dia ny fahafahan'ny tanky ambany, izay mitaky famenoana imbetsaka.
Jereo bebe kokoa Panasonic irrigators nify
PICK RANO - PICK RANO WP300 ...
3 haavon'ny tsindry hatramin'ny 80 Psi
450 ml fitahirizana mandritra ny 60 segondra
Araka ny soso-kevitry ny anarana, ny WP 300 dia modely amin'ny desktop misy endrika sy endri-javatra izay manamora ny fitondrana azy na aiza na aiza alehantsika.
Noho izany dia manana izy ireo nahena ny habeny ary novolavolain'izy ireo tamin'ny fomba toy izany azo tehirizina ao anaty kitapo fitsangatsanganana kely misy.
Izany koa dia manana mifanaraka amin'ny tambajotran'ny herinaratra any amin'ny firenena samihafa, manao azy ho solon'ny portable tsara ho an'ny modely bateria.
Oral-B 2 amin'ny 1
Oral-B PRO 3000 - Toby ...
Raha ny amin'ny Irrigators am-bava 2-in-1 misy irrigator sy borosy dental ny mpitarika tsy iadian-kevitra dia hydropulsor marika ity Oral-B. Ao anatin'io kitapo io ihany dia manana a borosy nify elektrika malaza ary hydropulsor hanaovana fanondrahana am-bava isaky ny miborosy.
Tsy te hanadino ihany koa ny modely 2-in-1 hafa izay nodinihinay, ny Waterpik WP900. Na dia tsy dia malaza amin'ny mpampiasa aza izy io, dia novokarin'ny orinasa manana irrigators nify tsara indrindra eny an-tsena.
Raha mbola tsy manana borosy nify elektrika ianao dia io no safidy tsara indrindra mahazo fahadiovana nify tanteraka ao an-trano.
Sowash: Faucet Irrigator tsy misy maotera
Tianao ve ny booster tsy misy motera tsy mitabataba sy tsy mandany herinaratra? Ny Sowash dia manana hevitra saika 100 ary salan'isa 4.2 mihoatra ny 5 avy amin'ireo mpampiasa izay nividy azy.
Ny vidiny dia ambany noho ny modely hafa mifandray amin'ny paompy sy eo amboniny amin'ireo mpivarotra tsara indrindra ary sarobidy indrindra.
ankehitriny misy modely an-jatony amin'ny marika samihafa miaraka amin'ny fepetra voafaritra, endrika ary vidiny. Izany dia manasarotra ny fisafidianana irrigator am-bava tsara ho an'ny tsirairay.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny hydropulsor dia ny fahombiazany amin'ny famongorana ny bakteria sy ny potipoti-tsakafo mety hijanona ao amin'ny vavan'ny vava aorian'ny fiborosiana.
Manomboka amin'ity toby ity, misy fepetra manokana manan-danja kokoa, toy ny fanerena tsindry na ny fahafahan'ny tanky, ary ny hafa tsy dia ilaina loatra toy ny famolavolana na ny haavon'ny feo.
Torolàlana amin'ny fisafidianana ny mpamboly am-bava tsara indrindra
Ireo no ilay toetra fototra tokony hodinihina mba hisafidianana ny irrigator tsara indrindra ho anao:
Amin'ny voalohany, Ny mahazatra indrindra dia ny mifidy modely desktop miaraka amin'ny paompy elektrika, fa misy olona tia kokoa a Portable dental irrigator hitondra azy amin'ny dianao na tsy misy motera aza.
Fomba fanerena sy fandoroana nify
Ny iray amin'ireo toetra lehibe izay manome antsika fanadiovana marina dia ny hery sy ny kalitaon'ny rano jet. Ny soso-kevitray dia ny misafidy modely manana hery ambony indrindra azo atao nefa azo amboarina foana, mba hahafahana manitsy izany amin’ny filantsika. Ny fahefana ambony nefa tsy voafehy dia mety hanelingelina ny olona sasany.
Ankoatra ny hery samihafa, koa misy jet rano samihafa ary fitaovana miaraka amin'ny fahafahana misafidy fomba fampiasana isan-karazany. Misy jet miaraka bebe kokoa isa-minitra, fiaramanidina mandeha mifangaro amin'ny bubble rivotra ary mitsindroka aza fomba fanorana.
Amin'ny modely sasany ny haben'ny tanky Tsy ampy ny fanadiovana tanteraka, noho izany dia mila mameno azy indray ianao mandritra izany. Toa tsy misy dikany izany amin'ny voalohany fa rehefa mandeha ny fotoana mety ho lasa manelingelina, indrindra raha kely dia kely ary mila mameno imbetsaka isaky ny fampiasana.
Ho fanampin'ny vavan-tsofina manara-penitra ho an'ny dentures salama dia misy ny vava manokana ho an'ny mpampiasa mampiasa orthodontie na manana implant nify. Raha te hahazo vokatra tsara izahay, dia manoro hevitra anao izahay mba handinika izany rehefa mifidy ny irrigator tsara indrindra ho anao.
Tsara ihany koa ny manamarika fa misy modely amin'ny nozzles raikitra sy miaraka Ny vavan'ny vava mihodinkodina ary mamela mora kokoa ny miditra amin'ny faritra rehetra amin'ny vava.
Ny fisian'ny kojakoja sy/na kojakoja
Alohan'ny hisafidianana hydropulsor dia tokony ho azonao antoka fa fara faharatsiny misy nozzle fanoloana izay ilainao. Ireo nozzles dia manana androm-piainana ilaina mandritra ny volana vitsivitsy ary ilaina ny manolo azy ireo, toy ny borosy nify.
Ny fividianana modely amin'ny marika ekena dia miantoka fa ny piesy dia ho azo alaina mandritra ny fotoana maharitra.
Ny haavon'ny tabataba sy ny famolavolana
Na dia ireo toetra izay tsy miantraika mivantana amin'ny fanatanterahana Amin'ny irrigator am-bava dia misy olona mametraka lanja be amin'ny lafiny roa. Ny tabataba dia tsy azo ihodivirana amin'ny irrigators misy herinaratra, saingy marina izany ny gadget sasany dia avy amin'ny fo kokoa noho ny hafa. Raha izay tianao dia fahanginana tanteraka mandritra ny fanondrahana am-bava dia tsy maintsy misafidy iray amin'ireo modely tsy misy maotera ianao izay ampidirina amin'ny paompy.
Ny karazana endrika dia lehibe, afaka misafidy samy hafa loko ary samy hafa koa ny habeny. Misy mihitsy aza ireo thrusters benchtop compact natao ho an'ny dia, toy ny waterpik wp-300 mpandeha. Ny fitaovana sasany dia azo ahantona amin'ny rindrina, zavatra azo ankasitrahana amin'ny toerana kely.
Vidin'ny irrigators dental sy garantie
Ny fahombiazan'ny irrigators sy ny fahafaham-po amin'ny ankapobeny ny mpampiasa dia midika fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nitombo ny fangatahana. Rehefa mitombo ny fangatahana dia tsy tambo isaina ireo mpanamboatra vaovao nipoitra izay natomboka teo an-tsena gazety amin'ireo marika tsara indrindra. Ireo marika ireo tsy manana traikefa na antoka izy ireo fahombiazana toy ny Waterpik, izay tohanan'ny ADA ary nanavao sy nanao patanty ny teknolojia nandritra ny 30 taona mahery.
Mazava fa tsy ny rehetra no afaka mividy ny modely tsara indrindra eny an-tsena, fa na Irrigators nify mora izay manome vokatra tena tsara. Ao amin'ny tranokalanay dia afaka mahita mihoatra ny iray ianao manana kalitao tsara sy hevitry ny mpampiasa tena tsara.
Hevitry ny mpampiasa
Ny hevitry ny mpampiasa hafa izay efa nanandrana ny irrigator am-bava dia reference tsara hahafantarana ny vokatra azony. Tsy mitovy ny olona tsirairay, fa ny hydropulsor manana naoty maro ary mahazo marika avo lenta dia tsy handiso fanantenana antsika.
Jereo ny Oral Irrigators tsara indrindra
Marika tsara indrindra amin'ny irrigators am-bava
Dingana iray ambonin'ny zavatra rehetra ny Waterpik, mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny nify irrigators amin'ny patanty am-polony sy fandalinana siantifika izay manohana ny vokatra azony. Na dia iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra aza izy io, dia tsy izy irery no manana booster tsara.
Kitiho izy ireo mba hidirana amin'ny fampahalalana rehetra momba ny marika malaza sy ny modely tsara indrindra:
[su_row] [su_column size = »1/2 ″ afovoany =» tsy »kilasy =» »]
Inona no atao hoe irrigator nify?
Ny irrigator am-bava na ny douche dental dia fitaovana iray mampiasa a fitetezam-pokonolona mitsimpona rano hanesorana ny potipoti-tsakafo sy takelaka bakteria de manohitra ny fiborosiana isan'andro izy ireo.
Ity fomba ity dia fantatra amin'ny hoe fanondrahana am-bava ary mahazo tonga any amin’ny faritra sarotra ny lavaka am-bava, toy ny faritra interdental, ny tsipika hihy na ny paosy periodontal.
Ahoana ny fampiasana Dental Irrigator
Ny irrigators rehetra dia manana rafitra mitovy ary amin'ny ankapobeny dia ahitana a fitoeran-drano, paompy ary nozzle aiza no hampiharana ny tsindry jet.
Ny modely sasany dia misy fanatsarana toy ny nozzles samy hafa, isan-karazany Adjustable haavon'ny tsindry, ary na dia fanorana na ny nify Whitening safidy. Amin'ireo nozzles samihafa dia afaka mahita manokana ho an'ny orthodonticsny maniry ary na dia fiteny roa.
Fanontaniana apetraka matetika momba ny irrigator am-bava
Fisalasalana mahazatra momba ny hydropulsors
Rahoviana no ilaina ny mampiasa hydropulsor?
Mety ho an'ny rehetra izy ireo izay mikatsaka ny hahazo fahadiovana nify tsara kokoa ao an-tranony, ka manampy amin'ny fisorohana aretina am-bava. Tsy mila manana olana ianao amin'ny fampiasana azy ireo, ary misy aza modely ho an'ny ankizy, fa Tokony hampiasaina foana amin'ireto tranga ireto:
Ireo marary manana braces izay manasarotra ny fanadiovana
Marary implant nify
Marary amin'ny gingivitis na periodintitis
Impiry isan'andro no ampiasana ny oral irrigator?
Azo ampiasaina isaky ny miborosy nify, raha mbola latsaky ny 5 minitra isaky ny adiny roa
Miasa ve ny rano paompy?
Irrigators miasa amin'ny rano paompy mahazatra, tsy ilaina ny mampiasa rano mineraly na mampiasa additives.
Afaka mampiasa azy io ve ny olona maro?
ny ny nozzles dia azo ovaina ary amin'ny ankapobeny dia tonga amin'ny loko samihafa, ka ny hydro-propellant tokana dia azo ampiasaina amin'ny mpikambana samihafa ao amin'ny fianakaviana.
Azo ampiasaina amin'ny fanasan-bava ve izy io?
Na dia tsy ilaina aza dia azo ampiana fanasan-bava amin'ny tahan'ny ambony indrindra 1: 1. Tsy soso-kevitra ny mampiasa additives hafa toy ny bikarbonate na chlorine.
Karazana irrigators am-bava
Afaka mividy isika amin'izao fotoana izao karazana telo ny fitaovana ho an'ny fanondrahana am-bava:
Tabletop Irrigator: Mila mampifandray azy ireo amin'ny tambajotra elektrika ianao ary izy ireo no mahazatra indrindra. Amin'ny ankapobeny, izy ireo no manolotra fampisehoana tsara kokoa, fomba fampiasana bebe kokoa ary isan'ny nozzles. Mety ho modely izy ireo irrigators tsotra na roa-in-iray, izay ahitana ihany koa ny borosy nify elektrika.
Irrigators portable: Izy ireo dia modely tsy misy tariby izay mampiditra bateria azo averina. Ireo fitaovana ireo no safidy tsara indrindra raha te hanala azy ao an-trano ianao na manana toerana kely ao amin'ny efitra fandroanao.
Faucet dental irrigator tsy misy maotera: Ity karazana fitaovana ity ireo no kely indrindra amidy, fa manana tombony izy ireo. Ampy izay mampifandray azy ireo mivantana amin'ny paompy ary satria tsy manana motera izy ireo dia tsy mila hery ary tsy mitabataba izy ireo.
Aiza no hividianana irrigator am-bava?
Na misafidy ity modely ity ianao na hafa Ny soso-kevitray dia ny mividy izany amin'ny Internet amin'ny Amazon. izy ireo Marika maro, ny vidiny an-tserasera tsara indrindra, fandefasana mora sy haingana ary azonao atao koa ny mamerina ny fividiananao tsy misy olana. Niara-niasa tamin'izy ireo nandritra ny taona maro izahay ary tsy nisy olana.
Irrigators am-bava lafo indrindra
Efa nilaza taminao izahay hoe iza no modely tsara indrindra eny an-tsena, saingy tsy mifanojo amin'ireo mpivarotra tsara indrindra ireo vokatra ireo. Eto ambany ianao dia afaka mahita a lisitra izay havaozina ho azy miaraka amin'ireo irrigators nify lafo indrindra amin'izao fotoana izao:
Irrigator am-bava portable... Jereo ny fiasa 11.106 hevitra Jereo ny fifanarahana
Oral-B Oxyjet Dental Irrigator... Jereo ny fiasa 20.761 hevitra Jereo ny fifanarahana
Apiker Dental Irrigator ... Jereo ny fiasa 10.840 hevitra Jereo ny fifanarahana
Irrigator am-bava portable... Jereo ny fiasa 5.344 hevitra Jereo ny fifanarahana
Oral irrigators-TUREWELL... Jereo ny fiasa 8.364 hevitra Jereo ny fifanarahana
Mpanamboatra nify matihanina ... Jereo ny fiasa 3.930 hevitra Jereo ny fifanarahana
Ny tsara indrindra	Irrigator am-bava portable...
Kalitaon'ny vidiny	Oral-B Oxyjet Dental Irrigator...
Ny ankafizinay	Apiker Dental Irrigator ...
Irrigator am-bava portable...
Mpanamboatra nify matihanina ...
4 hevitra momba ny «»
05 / 08 / 2019 amin'ny 00: 50
Aiza no ahafahako mividy ny plug magnetic ho an'ny irrigator waterpik ????
07 / 08 / 2019 amin'ny 09: 03
Salama Maria. Tsy lazainao ny modely tokony hanampy anao. Na ahoana na ahoana, ao amin'ny tranonkala ianao dia afaka miditra amin'ny angon-drakitra momba ny serivisy ara-teknika an'ny marika ho an'i Espaina.
17 / 12 / 2019 amin'ny 11: 14
lahatsoratra tena feno !! Misy mihitsy aza izy ireo miresaka momba ny nify irrigator an'ireo izay mifandray amin'ny paompy 🙂 (Tiako izy ireo). Efa nampiasa ny sod aho ary ny marina dia ny kalitao ... ara-dalàna satria ny rano dia mivoaka amin'ny fifandraisana amin'ny paompy ankoatra ny zavatra hafa. Ho anao izay tia kokoa ny mpandrano nify, dia misy marika hafa tsara noho ny So Wash, toy ny Kler ..., Ban ...
Mba hankafy ny irrigators ary aza adino ny mandeha any amin'ny mpitsabo nify tsindraindray fa ny zavatra iray dia tsy manala ny iray hafa 🙂
17 / 12 / 2019 amin'ny 14: 32
Misaotra indrindra Ana, miezaka mamorona votoaty tanjona sy kalitao izahay. fiarahabana
Miandraikitra ny angon-drakitra: AB Internet